Liverpool oo lagu booriyay in ay iska iibiso Mohamed Salah si ay u soo qaadato…. – Gool FM
Liverpool oo lagu booriyay in ay iska iibiso Mohamed Salah si ay u soo qaadato….
(Liverpool) 04 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa lagu booriyay in ay iska iibiso weeraryahankeeda Massaarida ah ee Mohamed Salah, si ay u soo qaadato laba ciyaaryahan oo muhiim ah.
Mohamed Salah ayaa 68 gool oo Premier League u dhaliyay 96 kulan oo uu ka soo muuqday tan iyo markii uu ka mid noqday Liverpool sanadii 2017.
Ciyaaryahanka caalamiga ah ee qaranka Masar Salah ayaa ku guuleystay labadii xilli ciyaared ee ugu dambeeyay gool dhalinta horyaalka Preimer Leagea, wuxuuna bar-tilmaamedsanayaa in 30 sano kaddib inuu la qaado horyaalka Premier League.
Hadaba, Liverpool ayaa lagu booriyay in iska iibiso Mohamed Salah islmarkaana ay soo qaadato midkood Kylian Mbappe ama Jadon Sancho.
“Dhageyso, waan ognahay [Salah] inuu dhaliyo goolal badan, waana ciyaaryahan sarre”. ayuu Darren Bent u sheegay talkSPORT.
“Laakiin markaad fiiriso ciyaartiisa guud si aad u dhaho qof sida Mane ah, waxaan dhihi lahaa Mane wuu ka fiicnaa isaga”.
“Waxa laga yaabaa inuu dhaliyo goolal ka badan Mane, laakiin heerka shaqo ee Mane, ma ahan mid naftiisa oo kaliya jecel, markasta wuxuu raadiyaa dadka kale, si dacaalad ayuu goolasha u qeybiyaa . Marka ma iibin kartid Mane, isagu waa muhiim”.
“Haddii aad ku iibineeso Mohamed Salah 100 million aadna helayso fursad aad kula wareegto midkood Kylian Mbappé ama Jadon Sancho waa in aad iska iibisaa”. Ayuu yiri Darren Bent.